Posted by pandora at 1:53 AM
ဈေးပွဲချိန်ဆိုတာ ... ဈေးကွဲချိန်ကိုပြောတာလားဟင်။
အသုံးချင်း တူတူပဲလား။ မသိလို့ပါ။
အရိုး အရင်း ကိုက်သူများအကြောင်း တွေးမိသွားတယ်။
အရိုးဆွေး... ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစား မိသွားပါသဗျာ...
အရိုးကိုက်သူများလို့ ပြောရမလား? အရိုးကြိုက်သူလို့ ဆိုဆို ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကန့်လန့်တိုက်တယ်ပဲ မှတ်မှတ်... ဒေါင်လိုက်ကျနေတဲ့ အရိုးတွေထဲမှာ ကန့်လန့်ရှိတဲ့ Rib ကိုမှ ဈေးကြီးကြီးပေး ဝယ်စားနေမိတော့တယ်။
အရိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် နိုင်တဲ့စိတ်..???..
တစ်ချို့ကလည်း အရိုးကွဲအောင်ရိုက်မှာ အသဲစွဲအောင်
ဒိုးလုံး က အရိုးထိအောင်ရူးခဲ့တယ်
စိုးလွင်လွင်က ကောင်မလေး နဲ့ရိုးမြေကျ လို့ ပြောခဲ့တာပဲ
အြရိုးက ဟိုသတ္တ၀ါ အစာဆိုတော့ နောက်တစ်ခါမြေနီကုန်းကအရှာဘီ ကြက်ရိုးသုပ် နဲ့နံရိုးကင် အမြည်းလေးစားမိရင် ပန်ဒိုရာ့အရိုးကဗျာ လေးရွတ်ရတော့မယ်ထင်တယ်။
လူမှာအမျိုး ကြက်မှာအရိုး လည်းရှိသေးတယ်
အဆီကိုစား အသားကိုမြိုလို့ ခြဆီကိုစုပ်ုအရိုးပါမကျန် တစ်ကိုယ်လုံး ဖြိုပြီးတာတောင်..
အရိုးကဗျာကို ကြိုက်သည် နှစ်သက်သည် တစိမ့်စိမ့်ပြန်ဖတ်သည်
အန်တီပန်ရယ့် အရိုးကို လူမသိအောင် ခိုးသွားတယ်
Do you have any skeleton in your closet? :-)
အရိုး တစ်ယောက်က အရိုးအကြောင်းလာဖတ်သွားတယ်ဗျို့ ။ ကဗျာလေး မိုက်တယ်။
မမပန်.. အရိုးကဗျာလေးက မိုက်လိုက်တာ..
ဒီကဗျာလေးရေးဖြစ်ဖို့တွေးမိတဲ့ အတွေးလေးကို ကြိုက်တယ်…
ရေးတတ်လွန်းတဲ့ အရေးလေးကိုလဲ ကြိုက်တယ်…
အရိုးအကြောင်းတွေက အစ်မရေးလိုက်မှပဲ တွေးစ၇ာတွေရပြီး..ကွန့်မတ်မှာလည်း အရိုးနှင့် ပတ်သက်သမျှတွေ တစ်ပုံကြီး တွေ့၇တယ်ဗျာ..
အစ်မ အရိုးကို သုသေသန စလိုက်တာ အများကြီး ပါလာတယ်..ပျော်စရာကြီး..
အော် အရိုး.. အရိုး..
ဟိုနေ့တွေက ကောမန့်ပေးမရဘူး ပန်ပန်၊
အရိုးကြိုက်တာ ကိုက်တာကတော့ အမ်းးးး
တမျိုးတစားတည်း ရှိတာပဲ လို့ သိထားတာပဲလေ....
"ဓါတ်မှန်ရိုက်မယ် အူတွေ ပြုံး ပြုံး နေကြ.. ချပ်.. ပုံထွက်လာတာ အရိုးများသာ...။" အဲ့သလိုနဲ့ အရိုးက တမူးသာ ဆိုတဲ့စကား ပေါ်ထွက်လာသတဲ့... :D
ချိနဲ့နဲ့ အရိုးလေး က ဒေါ်လေးရဲ့ အရိုးကဗျာကို ဖတ်သွားတယ်း)
တို့မွေးနေ့December 16။။ပန်ပန်ကို စောင့်နေတယ်/ မနေနိင်လို့လာခေါ်တယ်။
ဒိုးလုံးကတော့ အရိုးထိအောင် ရူး ဆိုပဲ ညီမပန်ရေ။ အရိုးစွဲအောင် ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ အစ်မကတော့ ကဗျာရေးတဲ့ သူတွေကို အားကျရင်း အရိုးရင့်လာပြီ .. ခုထိကို မရေးနိုင်သေးဘူး :)
ကျေးဇူး။့ haveanice day!
ကဗျာဆရာတော့ ဘယ်လို စရေးလိုက်တယ် မသိဘူး၊ ဖတ်သူတွေရဲ့ အတွေးတွေက ပိုလန်းနေတယ်။ :D အဲဒီလို ပြောလို့ ကဗျာက မလန်းဘူးလို့ ပြောတယ်တော့ မထင်လိုက်နဲ့။ ထိမှထိ...၊ မိုက်မှမိုက်ပဲဗျို့။
အရိုးကျေကျေ အရည်ခန်းခန်း ဆိုတာ သတိရလိုက်တယ်။
တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း လမ်းက ရှည်လွန်းတဲ့အခါ အရိုးမကျေ အရည်မခန်းခင် ခြောက်သွေ့ကြွပ်ဆတ်သွားတတ်သလားဆိုတာလည်း ပါရဲ့။
မရောက်ဖြစ်တာကြာလို့ လာဖတ်ရင်း အရိုးလေးကို ခိုက်သွားတယ်။ မိုက်သွားတယ်။ ကိုက်လည်း ကိုက်သွားတယ်။ ကြိုက်တယ်လို့...။
အရိုးကွဲအောင် ရိုက်မှ အသည်းကွဲအောင် စွဲ- ဆိုလားပဲ။